Taariikhda astaanta Netflix | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 28/03/2022 09:33 | Dhiirrigelinta
Sawirka isha Taariikhda astaanta Netflix: Tentulogo
Ma u malaynaysaa in astaanta Netflix ay weligeed sidan ahayd? Hagaag, runtu waxay tahay maya, hoosta madal caan ah oo caan ah waxaa jira taariikh dhan oo astaanta Netflix ah oo laga yaabo inaadan garanayn.
Markaa waxa aanu go’aansanay in aanu ku xasuusino (waayo waa da’ weyn) oo aanu ku xasuusinay wakhtiyadaas in ay calaamadeedii badashay oo aydnaan garanayn. Dabcan, waxa ay yeelatay 3 isbedel, oo mid ka mid ah uu aad muhiim ugu yahay. Ma rabtaa inaad ogaato midkee?
1 Taariikhda astaanta Netflix
1.1 Astaanta cusub ee Netflix
1.2 2014, sanadka isbeddelka iyo imaatinka astaanta labanlaaban
2 Taariikhda astaanta muusiga ee Netflix
Sida iska cad, taariikhda astaanta Netflix waxay la xiriirtaa horumarinta adeeggan madadaalada. Laakiin in yar ayaa garanaysa asalka Netflix, ama sababta ay muhiim u tahay in la fahmo falsafada shirkadda.
Xaaladdan oo kale, Netflix waxa uu ku dhashay 1997. Waalidiinta, abuurayaasha, iyo la-hawlgalayaasheeda waxay ahaayeen Marc Bernays Randolph iyo Wilmot Reed Hastings Jr., oo labaduba ka yimid California.
Waxay diiradda saareen ganacsi kiro fiidiyoow ah, dukaamada fiidiyooga ee caadiga ah ee jiray wakhtigaas. Laakin farqi yar Waxayna noqotay in halkii macmiisha ay ahayd in ay dukaanka tagaan, ay ahaayeen kuwii amarka qaatay ama boostada ku soo diri jiray. Si kale haddii loo dhigo, waxay ahayd muuqaal online ah ama DVD lagu kiraynayo boostada.
Hal sano oo nolosha ah ka dib, waxay haysteen 30 shaqaale ah iyo wax ka yar kun DVD oo ay ku shaqeeyaan. Laakiin laga bilaabo taariikhdaas guushiisu waxay bilaabatay inay kor u kacdo, si aad u dhaqso badan u kortay.
Magaca shirkadaas? Netflix. Sida iska cad, sumadoodu waxay sidoo kale ahayd mid ka tarjumaysa waxay sameeyeen, laakiin runtu waxay tahay inay aad uga duwan tahay sida aan hadda u aragno.
Bilawga, calaamaddu waxay ahayd madow, oo leh xarfo caadi ah. Oo kala tagay. Dhinac ayuu ka akhriyay Net, iyo Flix oo dhinaca kale ah. Sidoo kale, N iyo F labaduba waxay ka yara weynaayeen xarfaha intiisa kale.
Maxaase ereyga kala saaray? Hagaag, cajalad u ekaatay gariiradda filimada oo leh khadadka madow iyo guduudan.
Muddo 3 sano ah, wuxuu hayay astaantan. Ilaa imaatinka 2000, waxaa jiray waji isbedel.
Astaanta cusub ee Netflix
Sannadkii 2000 ma keenin oo keliya isbeddel qarniga, laakiin Netflix, oo bilaabay in ay isu dhisto shirkad caan ah oo sii kordheysa, waxay sidoo kale keentay isbeddelka astaanta. Dabcan, kii ugu horreeyay wuxuu socday dhowr bilood oo keliya, wuxuu gebi ahaanba la waayay oo aad u yar ayaa wax ka og.
Taariikhda astaanta Netflix hadda waxay isu beddeshaa mid kale, ka tagista tii ugu horreysay oo lagu beddelo mid leh asal cas. Xagga sare, xarfaha lagu sameeyay farsamada hore ee CinemaScope, caddaan oo ku hareeraysan dulmar madow oo u dhiganta inay ka soo baxayaan shaashadda, abuurista saameyn 3D. Qoraalada iyo midabada labaduba way isbedelaan.
Oo waa inay ka soo baxaan madow ilaa caddaan xarfaha iyo caddaan ilaa casaan xagga dambe. Xarfaha waa sans serif, taas oo ah, iyada oo aan lahayn nooc kasta oo qurux badan ama dhammaad qurux badan, dhammaantood waa isku mid, laakiin wax yar ayaa qaanso hoose ku yaal.
Muuqaal ahaan, gaar ahaan markaad u fiirsato astaanta, waxay u muuqan karaan inay dhaqaaqaan sababtoo ah saameynta xuduudaha madow ee hadhsan, taas oo ka dhigaysa inay ka soo baxaan naqshadeynta.
Waxa ay aad u jeclaysteen astaantan oo ay shirkaddu ku haysay muddo 14 sano ah, ilaa 2014 ay go’aansatay in ay mar kale beddesho.
2014, sanadka isbeddelka iyo imaatinka astaanta labanlaaban
2014-kii shirkadu waxay go'aansatay in la joogo waqtigii isbeddel caalami ah. Taasna, waxay ku kalsoon yihiin shaqada Gretel, oo ah shirkad naqshadeynta New York ah oo u horseeday inay naqshadeeyaan muuqaal cusub oo shirkad ah oo si xooggan u soo ifbaxday, ma aha oo kaliya Ameerika, laakiin adduunka oo dhan.
Maxayse sameeyeen? Bilawga, waxay ka saareen asalka cas, oo waxay ka dhigeen caddaan. Laakiin casaankaas ayaa loo isticmaalay in lagu dhejiyo magaca shirkadda, Netflix. Waxa kale oo ay meesha ka saareen hadhka iyo geesaha xarfaha oo ereyadu aad u soo shaac baxayeen. Oo intay dhawrayeen in yar oo dhididka ah, way u jilciyeen, ama ugu yaraan iyagoo ka saaray hadhka iyo geesaha waxay u ekayd mid saamayn yar.
Wax badan kama beddelin sumadii hore, laakiin waxay ku biireen wax walba si ay tan u abuuraan.
2016, laba sano ka dib astaanta cusub, calaamadda labanlaaban ayaa timid. Waana taas, baahida loo qabo in la yeesho calaamad yar, codsiyada, mobilada, tablets-yada, iwm. waxay u baahdeen wax khadka ku sii jira laakiin la akhriyi karo. Oo sida iska cad ereyga Netflix aad buu u weynaa si uu u istaago sidii summada ama astaanta app-ka.
Sidan ayay ku dhalatay summadaa labaad, taasoo hubaal ah inaad gacanta ku hayso. Waxa ay sameeyeen waxa ay diirada saareen N. Laakin ma aha N ee astaanta, laakiin si dhab ah ayay u abuureen oo haddii aad wax yar u fiirsato waxa aad arkaysaa in ay u egtahay qaanso lafteeda isku laalaabtay iyada oo abuuraysa xarafka N. Taasi waa sida ay u alifeen .
Si ay u soo baxdo, caddaanku ma noqon karo, sababtoo ah "cunida" midab aad u badan oo aan buuxin ujeeddadeeda, sidaas darteed waxay doorteen madow iyo casaanka qaansada lafteeda ayaa u madoobaata sidii ay ulaha dhinacyadu yihiin dhabarka dambe. qaansada iyo tan ka gudubta dhanka saxda ah.
Taariikhda astaanta muusiga ee Netflix
Haddii aad soo gashay Netflix oo aad ku aragtay filim ama taxane asal ah oo ku yaal madal, waxaad ogaan doontaa in marka hore ay ku ciyaaraan muusig yar oo leh astaanta shirkadda. Ma xasuusataa?
Hagaag, waa inaad ogaataa in astaanta sonic uu abuuray Hans Zimmer, halabuur caan ah oo ku guuleystay abaalmarinno muusig oo badan. Waxa uu ahaa kii sameeyay N in aan hore uga soo hadalnay in la xamaasadeeyo muusigga iyo kuwa animators labadaba, si ay u noqoto nooc digniin ah kuwa daawanaya taxanahaas ama filimkaas. Sida ka dhacday tiyaatarada, ka dib markii lagu dhawaaqay iyo filimaan kale, waxaa la saaray mid ka digaya in waxa ay u tageen ay bilaabeen.
Gaar ahaan, summada ayaa laga ballaariyay 0,4 ilbiriqsi ilaa 0,17 ilbiriqsi. Waqti yar, laakiin dhammaanteen waan arki doonnaa iyadoo dhammaystiran. Oo waannu maqli doonnaa.
Hadda oo aad ogtahay taariikhda astaanta Netflix, hubaal waxaad u arki doontaa si ka duwan. Calaamadaha kee baad jeceshahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Taariikhda astaanta Netflix